नेता अलग्याएर बैठक,एकतामा सकस
15th August 2020, Saturday
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण र कार्यविभाजनको काम लगभग टुंगो लागे पनि कतिपय बाँकी कामले अझै गति लिन सकेको छैन । एकीकरणयता किस्ताबन्दीमा हुँदै आएको ती काममा पछिल्लोपटक फेरि ढिलाइ हुँदै जाने संकेत देखिएको हो । एकीकरण र कार्यविभाजनका सबै बाँकी काम छिटो टुंग्याएर पार्टीको सम्पूर्ण पंक्ति सरकारको काम प्रभावकारी बनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेमा करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको पार्टी अबको ‘मिसन’ अर्थात् कार्यदिशा के भन्नेमै अलमलिएजस्तो देखिएको छ । सरकारको मुख्य काम आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण भनिएकाले डेढ वर्षदेखि पार्टीको सबै पंक्ति, भ्रातृ संगठनहरू एक मात्र त्यही योजना साकार पार्ने योजना निर्माणका साथ सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्दै दिनरात खटिनुपर्ने हो । तर, लाखौं कार्यकर्ता त्यस मिसनमा होइन, बेलैमा काम नपाएकाले पार्टी नेताहरूको कुरा काटेर दिन बिताइरहेका छन् । युवाहरूको श्रमशक्ति त्यतिकै खेर गइरहेको छ ।
अहिलेसम्म सम्पन्न भएको एकता र कार्यविभाजनमा पनि पूर्ण मापदण्ड नअपनाइएकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिरका नेता–कार्यकर्ताहरू पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् । ४ हजार पल्टनको केन्द्रीय कमिटी बनाएको साबिक माओवादीका थुप्रै केन्द्रीय सदस्यहरूले एकीकरणका क्रममा गाउँपालिकामा समेत ठाउँ नपाउने स्थिति बन्दा असन्तुष्टि चुलिएको छ । उनीहरूको असन्तुष्टि कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा अध्यक्षकै जिम्मेवारीमा रहेका प्रचण्ड पनि खासै गम्भीर देखिँदैनन् । प्रदेश २ मातहतको शपथग्रहण समारोहमा त पार्टी सदस्य नै नरहेकालाई प्रदेश र जिल्लामा राखिएको भन्दै कार्यकर्ताहरूले विद्रोह गरेका छन् । कार्यकर्ताहरूको व्यापक असन्तुष्टिका कारण आठै जिल्लाको शपथग्रहण कार्यक्रम नै रोकिएको छ । यी सबै असन्तुष्टिलाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक नसोच्ने हो भने नेकपा थप कमजोर र शिथिल बन्दै जाने आँकलन गर्न थालिएको छ ।
केन्द्रीय सचिवालयका चार नेताहरूले एकीकरणका बाँकी काम छिट्टै टुंगो लगाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नियमति बैठक गरिरहेका छन् । बिग फोर नेताका नाममा पछिल्लोपटक सोमबार र मंगलबार बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अलग्याएर बेग्लै छलफल चलाइएको छ । सरकारी निवासमा अलग्गै गुटको बैठक बोलाएर अहिले १५ वर्ष पार्टी चलाएको र देशको समेत नेतृत्व गरिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई एक्ल्याउन खोजिएको छ । यसरी दिनदिनै बैठक भइरहे पनि एकता र कार्यविभाजनका बाँकी काममा भने केही पनि प्रगति भएको छैन । अर्थात्, प्रगतिशून्यजस्तो देखिएको छ । केन्द्रीय आयोगहरू लेखा आयोग, अनुशासन आयोग र निर्वाचन आयोगको एकीकरण बाँकी नै छ । अनुशासन आयोगको एकीकरण पन्छाएर पार्टीभित्र नेता–कार्यकर्ताहरूलाई अनुशासनको डन्डा देखाइएको छ । यसमार्फत आफ्नो कार्यशैलीप्रति असहमत हुनेहरूलाई निरंकुश शैलीमा कारबाही गर्ने रवैया नेतृत्वले प्रकट गरेको छ । पार्टी झन् पछि झन् भ्रष्टीकरणको दिशातर्फ गइरहेका बेला शीर्ष नेतृत्वहरू नै गुट समाप्त भएको सार्वजनिक घोषणा गरेर हिँड्न थालेका छन् ।
त्यस्तै, अहिले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको पनि एकीकरण सम्पन्न भएको छैन । भारत प्रवासबाहेक प्रवासी मञ्चहरूको एकता र कार्यविभाजन पनि सम्पन्न भइसकेको छैन । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये अधिकांशले काम पाए पनि १९ जना केन्द्रीय सदस्यहरू भने अझै बेरोजगार नै रहेका छन् । उनीहरूलाई दिइने जिम्मेवारीबारे लगातार चलिरहेको अनौपचारिक छलफलले पनि टुंग्याउन सकेको छैन । त्यस्तै, प्रदेश २ सहित अन्य केही प्रदेशमा सदस्यहरूको मनोनयनबारे जारी विवाद अझै टुंगो लागेको छैन । एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाहरूमा जिल्ला कमिटी सदस्य चयनको विषयमा पनि विवाद कायमै छ । यी सबै विषय छिटो टुंगो लगाउन अस्वस्थताका बाबजुद प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओली आफैं सक्रिय देखिए पनि अहिलेसम्म ठोस परिणाम देखिएको छैन । चिकित्सकहरूले उनलाई आरामको आवश्यकता औंल्याइरहेका छन्, त्यसका बाबजुद उनको खटाइ देखिए पनि कुनै सुःखद परिणाम नदिएपछि धेरै प्रश्न उठिरहेका छन् । पछिल्लो कार्यविभाजनमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड नै मिचिएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले छुट्टै नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएका थिए । तर, त्यसबारे छुट्टै छलफल गरेर असमझदारी अन्त्य गर्ने विषयमा अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग संवाद गर्न चाहेका छैनन् । बरू पछिल्ला अनौपचारिक छलफलहरूमै वरिष्ठ नेता नेपाललाई नियोजित रूपमै बाइपास गर्न थालिएको छ । सोमबार र मंगलबारको छलफलमा नेपाललाई बोलाइएन ।
नेकपा अनिर्णयको बन्दी
‘बिचौलिया’को चंगुलमा सरकार
विधि र प्रक्रियाअनुसार पार्टी सञ्चालनको सन्देश
अर्ली महाधिवेशन ः अर्को दाउपेचको कार्ड
वैद्य छुटाउन डिएसपीकै चलखेल
कार्यकर्ताको आँखामा आँखा जुधाउने हिम्मत छ कमरेड ?
नेकपामा माधव नेपाल निर्णायक
आत्मविश्वासका साथ अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदै प्रधानमन्त्री
तीन नेताको सहकार्यमा नेकपाको भविष्य
वामदेव तानातानले निम्त्याएको कचिंगल
किन झस्किए प्रधानमन्त्री ?
चुस्त व्यवस्थापन र सुझबुझपूर्ण निर्णय
कोरोनाका नाममा ३२ लाख झ्वाम
काठमाडौं । कोभिड–१९ अर्थात् कोरेनाका कारण संसारभरि आक्रान्त फैलिरहेको बेला केहीलाई भने यो आर्थिक दुरुपयोग गर्ने मेलो भएको छ । जिल्ला अस्पताल तनहुँका कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारले पठाएको ५० लाख रकम त्यसैगरी मनपरी ढंगले भत्ताका नाममा खर्च गरेका छन् । आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा सिटामोलसम्म पुग्न नसकेको बेला सबै आइसोलेसन केन्द्रमा अत्यन्त...
काम रोकेर आन्दोलनमा व्यस्त
काठमाडौं । कोभिड–१९ को जोखिम झन् बढ्दै गएको छ । विश्वव्यापी रूपमै यो महामारीले सताउँदा अग्रपंक्तिमा रहेर स्वास्थ्यकर्मीका साथै अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूले महामारीविरुद्ध आफूहरूलाई उभ्याए । नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि कोभिड–१९ मा खेलेका भूमिकालाई सराहना गर्ने गरिएको छ । तर, कोभिड–१९ को जोखिम बढ्दै जाँदा निजामती कर्मचारी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरू भने...
६ अर्ब उठ्नेमा अझै आशंका
काठमाडौं । डेडिकेटेड र टंक लाइनको महसुल विवाद सुल्झाउने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगलाई दिने भित्री तयारी चलिरहे पनि सो आयोगको क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ । यो विवाद सुल्झाउन आयोगले नसक्ने जिकिर गर्न थालिएको छ । तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने सो आयोगलाई नै जिम्मा दिन खोजेको छ ।...
चारवटै विषयगत सभापति यथावत्
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका समितिहरूमा भएको सभापतिको निर्वाचनमा सबै समितिका सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । हाल निर्विरोध निर्वाचित भएकाहरू नै यसअघि पनि त्यही समितिका सभापति थिए । कार्यकाल सकिएपछि पुनः उनीहरूलाई नै सभापतिमा चयन गरिएको हो । समिति सभापति चयन गर्न शुक्रबार निर्वाचन भएको हो । निर्वाचनबाट प्रत्यायोजित व्यवस्थापन...
पारिजात ः एउटी स्वाभिमानी स्रष्टा
दार्जिलिङको सुन्दर प्रकृतिको काखमा डुबुल्की मार्दै कहिले फ्रकभरि चाँपका कोपिला बटुलेर नागबेलीको माला लगाएर, जंगलमा लुकामारी खेलेर बाल्यकाल बिताएकी पारिजातको प्रारम्भिक शिक्षा त्यही नै सम्पन्न भएको थियो । सांस्कृतिक कार्यकलापमा बढी रुचि देखाउने पारिजातको पढाइ भने मध्यमस्तरको थियो । उनले अनौपचारिक रूपमा घरमै केही अध्ययन गरेर औपचारिक अध्ययनका लागि दार्जिलिङका...
छोटो क्यानभासको चित्र
सामन्तकालीन अर्थ, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक व्यवस्थाले नारीलाई एउटा ‘तुच्छ वस्तु’ का रूपमा परिभाषित ग¥यो । नारीको बहुमुखी अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न तत्कालीन समाजव्यवस्थाले चाहेन । एउटा भनाइ नै बन्यो, ‘वीर भोग्या वसुन्धरा...।’ सामन्तवादभन्दा धेरै हिसाबले प्रगतिशील ठानिने पुँजीवादले पनि नारीलाई ‘वीर भोग्या वसुन्धरा’ को तहभन्दा माथि उकास्ने चाहना राखेन ।...
प्रहरी कार्यालयले नै कोरोनो ल्याउने त्रास
काठमाडौं । गोंगबुस्थित एक होटलमा बस्दै आएका रोल्पाका कृष्णबहादुर बोहोराको हत्याप्रकरणमा नेपालप्रहरीले तत्कालै चितवनबाट अभियुक्तप्रकाउ गरेर अनुसन्धानमा सफलताप्राप्त गरेको छ । चितवनकीकल्पना मुडभरी (पौडेल) ले आफैंले हत्या गरेको स्वीकारसमेत गरिसकेकीछन् । तर, सोही सन्दर्भमामंगलबार महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमापत्रकार सम्मेलन गरेर भने प्रहरीले उल्टै कोरोना संक्रमण पो फैलायो किभन्ने आशंका बढाएको...
कमलामाई–मेसान मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायमै
काठमाडौं । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित मेसान सिटीबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना भएको छ । बुधबार आयोजना गरिएको भर्चुअल समारोहमा कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग खत्री र मेसान सिटीका मेयर ह्यु आनखुनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । दुवै नगरका प्रमुखले आपसी हितका आधारमा मैत्रीपूर्ण सहयोग आदानप्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्...
सेनाका परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । मोेटरसाइकल दुर्घटनामा परी असामयिक निधन भएका नेपाली सेनाका सिपाही शिवराज रानाका परिवारलाई मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले बिमाबापत ७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । मेगा बैंकमा ‘मेगा कर्पोरेट बेनिफिट सेभिङ अकाउन्ट’ खोलेका दिवंगत सैनिक जवान रानालाई मेगा बैंकले सोही खाताको बिमाबापत ७ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको हो ।...
Copyrights : 2014 - 2020 ebudhabar.com, All Rights Reserved